Uhlaziyo lwe-Android 4.2.2 lwe & t & apos; s htc enye x ngoku ityhalelwa ngaphandle
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Uhlaziyo lwe-Android 4.2.2 lwe-AT & T & apos; s HTC One X ngoku iyatyhalwa ngaphandle
Uhlaziyo lwe-Android 4.2.2 lwe-AT & T & apos; s HTC One X ngoku iyatyhalwa ngaphandle
Kwangoko ngoLwesithathu, besikuxelele oko I-HTC iye yalibazisa ukuhlaziywa kwe-Android 4.4 Kwinguqulelo yaseMelika ye-HTC One kangange veki enye ukuya kwezimbini. Kwelinye icala, umenzi osekwe eTaiwan wayethembisile qalisa ukukhupha i-Android 4.2.2 ye-AT & T ebizwa ngokuba yi-HTC One X namhlanje. Ngaba i-HTC yenza njengoko isitsho, okanye i-HTC ithetha ukuba 'Nantsi ii-apos; ukudana rhoqo'?
Iindaba ezimnandi zezokuba xa kufikwa kuhlaziyo olucwangciselwe namhlanje, i-HTC yeza njengoko beyithembisile kwaye sele iqalile ukuthumela uhlaziyo lwe-OTA oluzisa zombini i-Android 4.2.2 kunye neSense 5 kwisixhobo. Le yokugqibela iquka iBlinkFeed, ekuzisela iindaba kunye neendaba zosasazo zasekuhlaleni. Kukwabandakanywa usetyenziso lwegalari oluhlaziyiweyo, Amagqabantshintshi eVidiyo, iShaneli yoMculo kunye neMiracast.
Ukuhlaziywa kwakhona kuya kulungisa iingxaki ngencwadi ye-AT & T, kunye neengxaki nge-NFC. Ukukhuphela kuya kuthatha imizuzu engama-20 ukuyigqiba neminye imizuzu eli-10 efunekayo ukuyifaka, kwaye kufuneka ibhetri yakho ihlawuliswe ubuncinci i-35% igcwele. Inguqulelo yesoftware oyifakayo yi-2.15.502.1. Ungazama ukuyikhupha kwifowuni yakho ngesandla ngokuya kuzo zonke ii -apps> Useto> Uhlaziyo lweSoftware ye-AT & T> Jonga uhlaziyo> Kulungile.
Njengoko besitshilo ngolunye usuku, uhlaziyo luya kuphuma lusemagqabini oko kuthetha ukuba ayinguye wonke umntu oya kulifumana ngaxeshanye. Ukuba awuyifumani namhlanje, mhlawumbi iza kuza ngomso.
I-AT & T ye-HTC One X ihlaziywa kwi-Android 4.2.2 kunye ne-Sense 5
umthombo: IHTC nge AndroidCentral
xfinity ngolwesihlanu omnyama ngo-2018
Uvavanyo lweSamsung Gear S2
Jonga i-Samsung Galaxy Buds 2
Eyona Ndawo yokuGcina i-Samsung Galaxy Savings Umsitho-izaphulelo ezinkulu!
Gcina $ 2.99! Umdlalo oDumileyo woKhuselo lweNqaba iBloons TD 5 ngoku isimahla kwi-Android